IJalimane, IJalimane Isehlukaniso - GERMANX
« : Agasti 10, 2020, 12:37:58 am »
Umkami uyangikhohlisa ngawo wonke amathuba futhi angisakwazi ukubekezelela. Sishade eTurkey sihlala eJalimane futhi sifuna ukuvula icala lesehlukaniso. Ngikuthanda ukwenza lokhu İNTURKEY? Ngicabanga ukuthi uzovuma ukudivosa ngoba akangithandi. Ucabanga ukuthi le nqubo izothatha isikhathi esingakanani? Ngabe ukhona onolwazi?
Ubuntu bami bufana nohlamvu lwegama lami lokuqala -> SELF <-
« Phendula #1: Agasti 21, 2020, 09:19:26 am »
Kucashunwe ku: expatriate - Agasti 10, 2020 ngo-12: 37: 58 am
Uzohlala damiana de mi germany turkey.
yebo wenqabile ukukwenza ngemuva kokuthi wazise isehlukaniso se-AC esisuka eTurkey siye eJalimane.